Burmese taste - Iora: နယူးအော်လင်းက မာဒီဂရာစ်ပုတီးပစ်ပွဲတော်
မတင်တာကြာလို့ လာလာအော်နေတဲ့ ဘော်ဒါတွေအတွက်ရယ်
ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၇ ရက် က ကျမသွားရောက်ဆင်နွှဲထားတဲ့ နယူးအော်လင်း က မာဒီဂရာစ် ပွဲတော်ရဲ့ ပုံရိပ်တွေကိုတင်ပေးလုိုက်ပါတယ်ရှင်။ တပျော်ကြီးသာ ကြည့်ကြပါတော့။
မာဒီဂရာစ် (Mardi Gras) ရဲ့ မူလကပြင်သစ်ကလုို့ ဆုိုပါတယ်။ ဥပုဒ်ရက်မရောက်မီ အဂါင်္နေ့ ပါတဲ့။
အဲဒီနေ့ မှာ ပွဲတော်တွေကျင်းပကြ စားကောင်းသောက်ဖွယ်တွေစားကြနဲ့ ဆင်နွှဲကြပါသတဲ့။ တုိုက်ရုိုက်ဆုိုရင်တော့ 'farewell to meat' ဖြစ်ပါသတဲ့။
ဟုိုအရင်တုန်းက အခုအမေရိကန်နုိုင်ငံ ရဲ့ လူဝီဇီယားနားပြည်နယ် တုို့ အလာဘားမားပြည်နယ်တုို့ မစ်စီစီပီပြည်နယ်တုို့ ဖြစ်လာမဲ့နယ်မြေတွေကို ပြင်သစ်တွေကကိုလိုနီနယ်ချဲ့ ပြီး
ပိုင်ဆုိုင်ထားခဲ့ကြပါတယ်။ နယူးအော်လင်း မှာ မာဒီဂရာစ်ပွဲကို ဆင်နွှဲခဲ့ကြတာ အဲဒီကုိုပြင်သစ်တွေ အခြေချနေထုိုင်လာခဲ့ပြီး ၁ရ၀၀ ခုနှစ်များအစောပုိုင်းမှာကတည်းကပါတဲ့။ ပြင်သစ်တွေ စတင်ရောက်ရှိခဲ့တာကတော့ ၁၆၉၉ ကပါ။ သူတို့ ဟာအ အခု နယူးအော်လင်းဖြစ်လာတဲ့ နေရာ ရဲ့ တောင်ဖက်မိုင်၆၀ လောက် အကွာ က မစ်စီစီပီမြစ်ဝ မှာ စပြီး စခန်းချခဲ့ကြပါသတဲ့။
တစ်နှစ်မှာတော့ အဲဒီပွဲ ကို လာရောက်တဲ့ ရုရှားတော်ဝင် Alexis Romanov, Grand Duke of Russia, ကုို ဂုဏ်ပြုတဲ့ အနေနဲ့ သူတို့ တော်ဝင်မိသားစုရဲ့အရောင်တွေဖြစ်တဲ့ အစိမ်း၊ ပန်းခရမ်းရောင်၊ နဲ့ ရွှေရောင် တွေနဲ့ ပွဲတော်ကို အလှဆင်ခဲ့ကြပါသတဲ့။ အစိမ်းက သစ္စာတရား။ ပန်းမရမ်းရောင်က တရားမျှတခြင်း နဲ့ ရွှေရောင် က တန်ခုိုးအာဏာ ကိုကုိုယ်စားပြု ပြီး ဒီနေ့ တုိုင် အဲဒီအရောင်တွေဟာ ပွဲတော်ရဲ့သင်္ကေတ အရောင်များအဖြစ်သုံးလို့ နေပါတယ်။ အဲဒီနေ့ က တော်ဝင်ဧည့်သည်ကို ကြိုဆုိုဧည့်ခံဖုို့ ကို လည်း ဘုရင် နဲ့ ဘုရင်မ (ကင်းနဲ့ ကွင်း) ကို ရွေးချယ်ဖန်တီးပြီး ဧည့်ခံစေခဲ့ရာက စလို့ ကင်း နဲ့ ကွင်း ရွေးချယ်လို့ အလှဆင်ထားတဲ့ ယာဉ်တွေပေါ်ကနေ ပုတီး တွေ ခွက်တွေ အရုပ်တွေ ဒင်္ဂါးပြား (အခုတော့ အတု)တွေ ပစ်ကျဲ ကြတဲ့ အလေ့ဟာ ဒီနေ့ ထိစွဲလာကြတာပါတဲ့။
ကဲ..အာလူးပေးတာရပ်လို့ အောက်ကပုံတွေကုို ရှုစားကြပါတော့။
အုိုင်အိုရာတုို့ ငယ်ငယ်က ကြည့်ဖူးခဲ့တဲ့ ၀င်းဦးနဲ့ ခင်သန်းနုပါတဲ့ မောင်တုို့ ချယ်ရီမြေ ဆုိုတဲ့ ရုပ်ရှင် ဟာ (အုိုင်အိုရာ အမှတ်မမှားရင်) အင်္ဂလိပ်ကား Mardi Gras ကို ပြန်ရုိုက်ထားတာဆုိုတာ အုိုင်အိုရာလည်း အဲဒီ ကားကုို အမေရိကန်မှာ ကြည့်ဖူးမှ သိတော့တယ်။ အဲဒီကားမှာ ဒီ မာဒီဂရာစ် ပွဲကို တည်ပြီးရုိုက်ထားတာလေ။ မောင်တုို့ ချယ်ရီမြေမှာ တော့ မြန်မာသင်္ကြန်ပွဲတော်အလှပြကားတွေနဲ့ ပေါ့။
ဒါကြောင့် သင်္ကြန်နဲ့ သဘောတရားဆင်တဲ့ ဒီပွဲတော်ကို သွားတော့ ပုတီးရဖုို့ အော်ရတာ တွေဟာ ရေပက်တော့အော်ကြသလိုမျိုးတွေလုိုလို ပန်းကုံးတွေပေးကြသလိုမျိုးလိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ ။ လူတွေကလည်းပျော်နေကြတာ တေးသံတွေကလည်း ကားတွေပေါ်မှာ တီးဝိုင်းတင်ပြီးဆုိုလာကြတာရော ဘင်ခရာတီးဝုိုင်းတွေလျှောက်ရင်းတီးတာရောနဲ့ မြိုင်နေတာဘဲ။ လူတွေကလည်း သီချင်းသံတွေနဲ့ အတူကကြ ယိမ်းကြနဲ့ ။ အုိုင်အိုရာလည်း မြန်မာသင်္ကြန် ကိုသတိရလိုက်တာ အရမ်းဘဲ။
အုိုင်အိုရာတုို့ လည်းပျော်ပျော်ကြီး အော်ဟစ် ယိမ်းခဲ့ပါသေး။ ကဲမဲ့သာကဲရတာ အဲဒီနေ့ က အရမ်းအေးတာ။ ဦးထုတ်တွေရော ဂျာကင်တွေရော ပုဝါတွေရော ပုတီးတွေရော အရုပ်တွေရောနဲ့ ရှုပ်ရှက်ကိုခပ်နေတာဘဲ။း)
လေထဲမှာ ပစ်ကျဲလိုက်တဲ့ ပုတီး
ပွဲတော်က ပြန်လာတော့ လူတွေမှာ ပုတီးတွေ အရုပ်တွေကို စားစရာတွေထဲ့လာတဲ့ရေခဲဘူး တွေထဲရော အိတ်တွေနဲ့ ရော သယ်ပြန်ကြတယ်။ ညောင်းရင် ရေခဲဘူးပေါ်ထုိုင်ကြသေးတယ်။း)
ဒါက ပွဲတော်က အပြန် ကမ္ဘာ့ အရှည်ဆုံးတံတားတစ်ခုပေါ်က မြင်ကွင်း
အုိုင်အိုရာတုို့ ရလာတဲ့ ပွဲတော်က ပစ္စည်းတွေ
လာလည်တဲ့ သူငယ်ချင်းအသစ်တွေ အဟောင်းတွေ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
Posted by Iora at 10:17 PM
Labels: Travel, အမှတ်တရများ
Ma Tint February 19, 2015 at 1:16 AM
သေချာတာပေါ့ အိုင်အိုရာရယ်.... မတင်တာကြာဆို ဘလော့ဂါနာမည်တောင် မေ့ချင်ချင်ဖြစ်နေပြီ... :P
စိတ်ဝင်စားစရာ ပုတီးပစ်ပွဲတော်လေး အကြောင်းသိခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးပါနော်။ တစ်ရွာတစ်ပုဒ်ဆန်းပါလား...
Anonymous February 19, 2015 at 6:57 PM
မာဒီဂရာစ်ကုို ဒီကလူတွေလည်းအုိုင်အိုရာတို့ သင်္ကြန်စွဲသလိုစွဲတာ။
Aunty Oo February 19, 2015 at 5:47 AM
ပွဲတော်ပြီးသွားရင် လမ်းပေါ်က ဓါတ်ကြိုးတွေ သစ်ပင်တွေမှာ တွဲလောင်းတွေအများကြီးဘဲ။
San Htun February 19, 2015 at 6:25 PM
Anonymous February 19, 2015 at 7:10 PM
Tun Tun February 19, 2015 at 8:25 PM
အစားအသောက် ပို.စ်တွေကိုလဲ မျှော်နေပါတယ်။ ;)
အပြင်ထွက်စားတုိုင်းလိုလို ဓါတ်ပုံကတော့ရုိုက်သလားမမေးနဲ့ ဘဲ။
စူးနှယျလေး February 20, 2015 at 1:27 AM
ဟင်းလေးတွေ တင်ပါဦး မျှော်နေတယ်
ဒါတောင်ပုတီးတွေက ဘေးကျသွားတာတွေအောက်ကျနေတာတွေမကောက်လို့ ..သိလား.
ဟင်းလေးတွေတင်ပါအုန်းမယ်။ မျှော်နေတဲ့သူတွေများနေတော့ တင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှဘဲနော်။
မီးမီးငယ် February 24, 2015 at 5:38 AM
ပို့ လုိုက်မယ်ဗျို့ ...တစ်ခုမကဘူး အများကြီးပေးမယ်။
အရင်နှစ်တွေထဲကရထားတာတွေနဲ့ ဆုိုနဲဘူးကြီးလို့ ပြောရမယ်။ ဟ ဟ..
May Thu February 26, 2015 at 8:28 PM
မမအိုင်အိုရာ ရေပုတီးတွေအများကြီးပဲ။ မလေးက ပုတီးလေးတွေမြင်အရမ်းသဘောကျတာ။ မမရေဟင်းတွေတင်အုံးနော်။
Anonymous February 27, 2015 at 10:59 AM
ကုိုယ်ကပုတီးတွေကို မြင်ရင်နဲ့ ပစ်တဲ့အချိန်ဆုိုအရမ်းလိုချင်တာ။ ခလေးလိုအော်ဟစ်ပြီး ဖမ်းရတာပျော်စရာ။
ဒါပေမဲ့အိမ်အလှဆင်တာမှာပဲ သုံးဖြစ်တယ်။ မဆွဲပါဘူး။ ဒီမှာကျတော့လည်း ပေါသလိုဖြစ်နေတာကိုး။
ဟင်းတွေတင်အုန်းမယ်လေ။ မေးတဲ့သူတွေများနေတော့။ အဲကျ လာခဲ့အုန်းနော်။
ပြုံးပန်း April 6, 2015 at 6:24 AM
စိတ်ဝင်စားစရာပဲနော်၊ မောင်တို့ချယ်ရီမြေဟာ အဲဒီလိုဆိုတာ သိရတယ်၊ ပုံတွေ အကုန်လုံးကိုတော့ ကော်နက်ရှင်ကြောင့် မကြည့်ရသေးဘူး၊ မျှဝေပေးလို့ ကျေးဇူးပါ။
When you can see the images I think you will enjoy them.
I can't type Burmese font now. I don't know why. Will figure it out later.